Ingabe Zikhona Amasu E-Twitter SEO?
Ngo-2017, i-SEO isiye yaba isiteshi esikhulu sokumaketha. Namuhla, ukusebenza kwe-injini yokusesha akukhona nje ngokuthola izinsiza ezibekwe yizinjini. Ukuze uqonde kangcono ukuthi i-SEO iphathelene ngani, kufanele uqale uqonde ukuthi yiziphi izindlela ezithinta umphakathi ezithinta i-SEO.
Kuye kwafakazelwa ukuthi ukuzibandakanya kwezokuxhumana kwezenhlalo kuyingxenye ebalulekile yezinga eliphezulu lewebhu. Izimpawu zomphakathi zingakwandisa izinga le-SEO langakini.
Isebenza kanje: ubukhulu bomphakathi wakho nokubandakanyeka kwayo yizinkomba ezibalulekile zokuqukethwe kwakho kanye nekhwalithi yakho. Ngaphezu kwalokho, okuqukethwe okuvela kuma-social media ngokuvamile kubonakala kwimiphumela yosesho lwe-Google. Yingakho i-Twitter enkulu, ehloselwe i-Twitter elandelayo futhi iqhaza ngokuqukethwe komkhiqizo wakho iyasiza kakhulu ebhizinisini lakho.
Ngakho, namuhla, ochwepheshe be-Semalt bazokutshela ngamathiphu aphumelele kakhulu ekusebenziseni kwakho kwe-Twitter SEO. Basebenzise ngokuzikhandla ukukhulisa okulandelayo kanye nebhizinisi lakho.
i-Twitter SEO Okusemqoka Okufanele Uyazi
1. Ukuthuthukisa i-Twitter ephumelelayo SEO Isu
Into yokuqala okufanele uyenze ukudala uhlelo oluhle lwecebo. Njengomthetho, amasu aqala ngezinhloso ezijwayelekile. Chaza umgomo wakho oyinhloko ngokunquma ukuthi uluhlobo luni lwemiphumela oyilindele ngokusebenzisa i-Twitter ngokuthengisa. Mhlawumbe, uzama ukukhuthaza ukuqashelwa kwe-brand, ukuthengisa isevisi entsha noma ukwandisa ithrafikhi yebhulogi?
Uma usuqedile ngokukhomba umgomo wakho, isinyathelo esilandelayo ukukhetha nokuhlola amaqhinga afaneleka kakhulu ekufinyeleleni lezo zinhloso.
2. Ukugxila kwizwi lomkhiqizo
Khumbula: njalo i-tweet eyodwa ibonisa uphawu lwakho. Yingakho ama-Twitter okuthunyelwe kufanele ahlale ethembekile egameni lakho lomkhiqizo, emele ubunikazi bakho. Qinisekisa ukuthi bayathinta izilaleli zakho ezibhekiswe kuzo.
Enye into ebalulekile ukuhlela - hlela ama-tweets akho hhayi nje kuphela we-typos kodwa uze uqiniseke ukuthi u-100% uqinisekile ukuthi i-tweet ngayinye ibonisa yonke imininingwane ofuna ukwabelana ngayo namakhasimende.
3. Ukuqhubeka Nomphakathi
Akunakuphika ukuthi ubukhulu besayizi. Nokho, uma kuziwa ku-Twitter, ukuzibandakanya kuyinkosi. Yenza abalandeli babelane ngokuqukethwe kwakho, kodwa zama ukugwema amaqhinga ashibhile - akwenzeki ukutshala izimali.
Esikhundleni salokho qalisa ibhola lokugqekeza bese uligcina lihamba ngokubandakanya kokubili: abalandeli bamanje nabakwaziyo. Qala ngokudala okuqukethwe okubalulekile abantu abafuna ukuzibandakanya nabo futhi babelane nabo. Enye into ukuphendula - phendula imibuzo yabantu kanye namazwana, phendula ama-tweets ngqo. Ungakhohlwa ukubuyisa noma yikuphi ukukhuluma, ungeze amanothi akho.
4. Ukukhetha Amagama Abalulekile
Kubaluleke kakhulu ukwenza okuqukethwe kwakho kube lula ukuthola. Kufanele uphathe i-Twitter yakho njenganoma yimuphi injini yokusesha. Zama ukusebenzisa amagama angukhiye afanele kuwo wonke ama-Twitter. Ungakhohlwa ngama-hashtag, bio, namagama-ncazo - angasiza futhi ikhasi lakho le-Twitter.
Khumbula, ezimweni eziningi, abantu basesha i-Twitter ngamagama angukhiye. Ngakho-ke, qiniseka ukuthi i-akhawunti yakho ibonisa ukuthi yini efanele ebhizinisini lakho.
5. Ukulandelela i-Twitter yakho ye-Traffic
Njengoba bethi, lokho akuzona izinyathelo akukhulumi. Awukazange uvule ama-analytics we-Twitter? Khona-ke ungcono kakhulu ukuya kulokho ngokushesha ngangokunokwenzeka ukuze uthole isifinyezo esheshayo sendlela oyenzayo futhi ulandelele isonto lakho lokuzibandakanya ngesonto.
I-Google Analytics ingabuye ikutshele ukuthi uthola ukuvakashelwa kwekhasi elingakanani kusuka ku-Twitter. Lolu lwazi luzokunika umqondo wokuthi kungakanani umgwaqo wakho ongasilandela emuva ku-Twitter.
Njengoba sazi, i-Twitter yindawo egcwele. Dala imilayezo eyokukwenza ume eceleni komncintiswano. Gcina okuqukethwe kwakho kuyigugu futhi kulula ukufunda. Ngaphezu kwakho konke, yenze kube efanele futhi ewusizo, ngoba yilokho i-Twitter SEO isebenza khona Source .